समाचार - कसरी तपाइँको झोला परियोजना को लागी एक सही उद्धरण प्राप्त गर्न?
धेरै ग्राहकहरूले ह्यान्डब्याग कारखानाहरूको खोजीमा रहेका उनीहरूको अनुकूलित ब्याकप्याक्सको लागि जति सक्दो चाँडो सहि उद्धरणहरू पाउने आशा राख्दछन्। यद्यपि बिभिन्न कारणहरूले गर्दा निर्माणकर्ताहरूले तपाईंलाई नमूना वा झोला विवरण बिना नै एकदम सही उद्धरण दिन गाह्रो छ। वास्तवमा, त्यहाँ अधिक सहि उद्धरण प्राप्त गर्ने एउटा तरिका छ, हेरौं!
हैंडब्याग कारखाना सामान्यतया मूल्यको हिसाब डिजाइन, सामग्री र ब्यागको आकारको आधारमा हिसाब गर्छन्। यदि ग्राहकले निर्माणकर्तालाई मात्र तस्विरहरू पठाउँदछ भने, निर्माता प्याकेजको विशिष्ट विवरणहरूको बारेमा निश्चित छैन र सही उद्धरण दिन सक्दैन।
तसर्थ, यदि तपाईं सहि उद्धरण प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने उत्तम तरीका भनेको नमूना प्याकेज निर्मातालाई पठाउनु हो र निर्मातालाई वास्तविक मूल्यको उद्धृत गर्नु हो। यदि तपाईंसँग भौतिक नमूना छैन भने, तपाईं निर्माणकर्तालाई विस्तृत डिजाइन रेखाचित्र पनि प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। निर्माता तपाइँको डिजाइन अनुसार एक बोर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। नमूना पूरा भएपछि, मूल्य बाहिर आउँछ।
थप रूपमा, यसको वरिपरि किनमेल गर्न पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, जसले गर्दा तपाईलाई झोलाको मूल्यको बारेमा कुनै नराम्रो कल्पना आउन सक्छ र केही अनियमित निर्माताहरूले जानाजानी उच्च मूल्यको रिपोर्टिंग गरेर धोका दिनबाट बच्न सक्दछन्।